पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणमा बिताएको लामो अवधि मध्यको एउटा समय बिन्दुलाई एकीकृत नेपालको निर्माण मान्ने हो भने, काठमाडौँ एकीकरण गरेको समय वि.स. १८२५ असोज (१७६८ सेप्टेम्बर २५) लाई एकीकृत नेपाल निर्माण भएको दिन मान्नुपर्ने हुन्छ। जतिबेला पृथ्वी नारायण शाह नेपालको पहाडी इलाकामा राज्य एकीकरण गर्दै थिए, ठिक त्यही बेला पृथ्वीको ठिक विपरीत विन्दुमा अर्को राष्ट्र निर्माण हुँदै थियो ।
हो, त्यही समय जर्ज वाशिंगटनले स्वतन्त्रता सेनानी गठन गरेर अमेरिकाको स्वतन्त्रता र निर्माणको मुक्ति सङ्घर्षको आगो बाल्दै नेतृत्व गर्दै थिए। विपरीत विन्दुमा रहेका अलि फरक भौगोलिक परिवेशका भिन्न भूभागमा रहेका यी देशहरू समकालीन हुन् । तर यसरी भन्न हामीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। यी समकालीन देशका समानान्तर कुराहरूको बारेमा थोरै चर्चा गर्न खोज्दा यस्तो देखियो ।
पृथ्वी नारायण शाहको जन्म वि.स. १७७९ (सन् १७२३) हो भने जर्ज को जन्म वि.स. १७८८ (सन् १७३२ ) पृथ्वीनारायण शाह भन्दा जर्ज ९ झन्डै ९ वर्ष कान्छा देखिन्छन् । पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेको वर्षलाई नेपाल निर्माणको आधार वर्ष मान्ने हो भने संसार भरि नै नयाँ मुलुकहरू निर्माण र एकीकृत हुने प्रक्रियाको प्रारम्भिक अवस्था थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
यसरी हेर्दा अमेरिकाको स्वतन्त्रता सन् १७७६ (वि. स. १८३३ ) मा भयो । पृथ्वीनारायण र जर्ज को उमेर ९ वर्षको फरक अनि नेपाल र अमेरिकाको एकीकरण / निर्माण पनि लगभग ९ वर्षको फरक रहेछ । सँगै अस्तित्वमा आएका दुई मुलुकको अहिलेको अवस्था तुलना गर्नु भनेको आफैमा हास्यास्पद तर्क हुन सक्छ। “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” नारालाई सार्थक बनाउन यस्तो विषय त्यति नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले चर्चा गर्न खोजिएको हो ।
अमेरिकाको संवैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक विषयहरूको जग जर्जको नेतृत्वमा भएको थियो । त्यो नै अमेरिकी राष्ट्र निर्माणको अभियानको आधार, प्रणालीको विकास गरेको समय थियो । त्यसैसरि पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म स-साना गणराज्यको एकीकरणको आधार तयार गरी एकीकरण शुभारम्भ भएको पनि त्यहीँ समय हो ।
नेपालको इतिहास, भौगोलिक अवस्था, एकीकरणपछि यसले व्यहोर्नु परेको राजनीति षड्यन्त्र, जालझेलभित्र मौलाएको नेतृत्व, नीति, नियम, सत्ताको होडबाजीले नै यसलाई जड बनाएको कारण अग्रगमनमा बाधा भइरहेको कुरा इतिहासको तुलना गरेर हेर्दा देखिन्छ ।
अमेरिकामा एकपटक विश्वविद्यालयको कक्षा लिँदै गर्दा प्रोफेसरले प्रश्न गरे। संसारमा मुलुक निर्माणसँगै संविधान पनि निर्माण भएको देश कुन हो? सामान्य ज्ञानमा रुचि राख्ने भएकोले मैले यो प्रश्नमा धेरै घोत्लिए तर उत्तर आएन । अरूबाट पनि उत्तर नआए पछि अन्तिममा प्रोफेसरले भने- ” संसारमा अमेरिका मात्र यस्तो देश हो, जहाँ राष्ट्र निर्माणसँगै बनेको संविधान अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ। अमेरिकाको संविधान सन् १७८९ मा जारी भयो। समय र परिस्थितिले सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म दुईसय तीस वर्षमा २७ वटा संशोधन भएर अमेरिकी राज्य उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालन भएका छन् र त्यही संविधानले काम गरी रहेको छ । अमेरिकाको राज्य सञ्चालन प्रणाली हेर्दा त्यहीँ संविधान समय सापेक्ष संशोधन हुँदै अनन्तसम्म रहने ब्यावस्था छ।
अमेरिकामा सरकारको अवधि अर्थात् राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । कुनै कारणले राष्ट्रपतिको मृत्यु भए र महाभियोग लगाएर हटाएको अवस्थामा बाहेक, अहिलेसम्म सबै राष्ट्रपतिहरूले पूर्ण अवधि सरकार चलाएको छन् । त्यही भएर अमेरिकामा सरकारको स्थायित्व भन्ने शब्दको प्रयोग भएकै छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालय बाहेक यत्रो ठुलो भूक्षेत्रको लागि अमेरिकामा जम्मा १५ वटा मात्र मन्त्रालय छन्। अमेरिकी सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयहरूमा कृषि, वाणिज्य, रक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, गृह, स्वास्थ्य तथा मानवीय सेवा, न्याय, आवास तथा सहरी विकास, आन्तरिक मामिला, श्रम, परराष्ट्र, यातायात, अर्थ र भूपू सैनिक रहेका छन् । संसारभर शक्ति र प्रतिष्ठाको हिसाबले अमेरिकी राष्ट्रपति पछि दोस्रो स्थानमा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रीलाई मानिन्छ।नेपाल पाटी
रसिया-युक्रेन द्वन्दको अर्को खतरनाक पाटो !